0 comments Posted by မိုးပြေး at 6:11 PM
0 comments Posted by မိုးပြေး at 12:37 PM
ChristMas Eve ရဲ့တညတာ
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 9:01 AM
အားလုံး Merry Christmas ပါ ။
Christmas Party တွေ နေရာ အနှံ့မှာ ဆင်နွှဲနေကြပီဟုတ်။ ကျနော်တို့ သင်္ဘောမှာလည်း ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေပေါင်းလုပ်တဲ့ Party တွေ ရှိပါ့ဗျာ။ မနေ့က တပွဲ ဒီနေ့တပွဲ ၂ပွဲပေါ့။ မနေ့ညကတော့ တီးဝိုင်းတွေ BBQ တွေ၊ ယာမကာ နဲ့ အပျော်အပါး ကစားစရာတွေနဲ့ စည်လို့နေပါတယ်။ ကျနော်လဲ ခဏတဖြုတ်တော့ တက်ဦးမှ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ခဏတက်ကာ BBQ လေးနည်းနည်းစား Christmas Song လေးတွေ ခဏတဖြုတ်နားထောင်ပီး လူများတဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ ပြန်ဆင်းကာ အင်တာနက် ခဏတဖြုတ် သုံးပီး အိပ်ယာဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ပျော်လို့ အိပ်မောကျတဲ့အချိန်ကျမှ MERRY CHRISTMAS TO YOU ALL !! ဆိုတဲ့ အသံကြောင့် ကျနော်ဇဝေဇ၀ါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အိပ်မောကျစအချိန်မို့ အိပ်မက်လား တကယ်လား ဆိုတာ ရုတ်တရက် ခွဲခြားလို့ မရခဲ့ပါဘူး နောက်မှ သီချင်းဆက်ဆိုတော့မှ ဒါဟာ အိပ်မက် မဟုတ်ပဲ တကယ့် အဖြစ်အပျက် ဆိုတာ သိခဲ့ရပါတော့တယ်။ အိပ်ယာက လိုက်ကာလေး အသာလှစ်ကြည့်လိုက်တော့ ဘုရားရေ ကျနော်တို့ရဲ့ Manage၊ Senior Supervisor၊ Pit Boss၊ Bond Store Supervisor နဲ့ လုံခြုံရေး အကိုကြီး တယောက်တို့ပါ။ အားလုံးဟာ မြန်မာတွေ ချည့်ပါပဲ ။ အခုမှ ပဲ အစောပိုင်းက ကျနော်တို့ဆီက ဂစ်တာ ခဏငှားပါလားဆိုပီး လာငှားသွားတဲ့ အကြံအစည်ကို သိပါတော့တယ်။ အားလုံးကလည်း Dept အသီးသီးက တာဝန်ရှိလူကြီးတွေဆိုတော့လည်း အိပ်ချင်ပေမဲ့ ပြုံးပြုံးလေး နဲ့ သီချင်းပီးအောင် နားထောင်ရတာပေါ့။ သီချင်းကတော့ ခရစ်စမတ်တွေမှာ ကြားနေကျ “ ဒီအိမ်ပေါ်သို့ ကောင်းချီးမင်္ဂလာ ရောက်စေသောဝ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းပါပဲ။ သူတို့အထဲမှာက တကယ့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ၂ယောက်သာ ပါ ပါတယ်။ ကျနော်လည်း ငိုရခက် ရယ်ရခက်နဲ့ လူကြီးတွေ မူးပီး လာဆိုကျတာဆိုတော့လည်း ငြိမ်ပီးနားထောင်နေရတာပေါ့။ သူတို့လည်း သီချင်းပီးရော ကျနော်လည်း MERRY CHRISTMAS ဆိုပီး ချော့ကလက်လေးတွေ တခုစီ လက်ဆောင် ပြန်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကဲ ဆက်အိပ် ဆက်အိပ် ဆုိုပီး တခြား အခန်းတွေဆီ ဆက်သွားပါတော့တယ်။ အဟဲ ကျနော့ Christmas Eve Day ကတော့ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကုန်ဆုံးသွားပါပီဗျာ။
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 7:22 AM
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ သီချင်းမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်ကိုလွဲတဲ့ တနေ့ပါပဲ။ စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ မနက် မျက်စိ နှစ်လုံး ပွင့်ကတည်းက လွဲလိုက်တဲ့အလွဲဟာ ညအိပ်လို့ မျက်စိနှစ်လုံး ပိတ်မှ ပဲ ပီးပါတော့တယ်။ မနက် အိပ်ရာက နိုးတော့ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ Alarm မြည်တဲ့ ဖုန်းကို တံတောင်နဲ့ထောင်းမိတယ်လေ။ နောက်မှ ၀ယ်ထားတာ ၂ ရက်ပဲ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ ခေါင်းထဲပေါ်လာတော့မှ အတင်းကို ပြူးပြဲပီး ကြည့်ရတယ် တော်သေးတာပေါ့ ဘာမှမဖြစ်လို့။ မနက်စာ စားမယ်ဆိုပီး သွားတော့ ဘာမှ မရှိတာနဲ့ ကြက်ဥကြော်မယ်ပေါ့ လုပ်တာ ရိုးရိုးမလုပ်ပဲ အကွန့်တက်တာလေ အရင်က Omelet လုပ်စားနေကြကို ရှည်ပီး တလုံးကို ဒီအတိုင်းထည့်လိုက်တယ် ကြက်ဥက ၂မျိုးရောပီး ဘာအရသာမှန်းကိုမသိတော့ဘူး နောက်တခေါက်ကလည်း သွားလုပ်ရမှာ ပျင်းတာနဲ့ ဒီအတိုင်းပဲ စားလိုက်တော့တယ်။
အလုပ်ဝင်တော့လည်း စိတ်က ဘာကို အလိုမကျလို့ မကျမှန်းမသိပါဘူး အလုပ်လုပ်ရတာကို အစဉ်မပြေဘူး နေ့လည် ထမင်းစားတော့လည်း ဘာဟင်းမှ မရှိ စားရတာအစဉ်မပြေ ခရီးသည်တွေကလည်း ဒီနေ့မှ အရမ်းများပီး လျှောက်စရာ နေရာတောင် မရှိ အော်လိုက်ကြတာလဲ ငါးစိမ်းသည် အရှုံးပေးရလောက်တယ်။ ဒီလောက်များတဲ့လူတွေ ဘယ်အချိန်ပြသနာ ထတက်မလဲ မသိဘူး စဉ်းစားနေတုန်း ရှိသေး အဘွားကြီး တယောက်က အဘိုးကြီး တယောက်ကို Roulette ကစားတဲ့ နေရာမှာ ဖောင်းခနဲ နားပန်ကျင်းလိုက်တာတွေ့လိုက်ရတယ် (စိတ်ထဲကတော့ ဘုရား တော်တော် လက်သွက်တဲ့အဘွားကြီး ဆိုပီး ကျိတ်ချီးကြူးမိတာပေါ့ :D) စိတ်ထဲက တွေးနေလို့ မဖြစ်ဘူးလေ ဟိုမှာက စကားများပီး ထချကြတော့မယ် အဘိုးကြီးကလည်း အသင့်နေရာ ယူပီးပီ သူတို့ကြည့်ရတာ တကယ့်ကိုဖိုက်ကြ တော့မယ် ပုံပေါက်နေတယ် အဘိုးကြီးက နေရာသာယူထားတာ တကယ်ဆော်နေတာက အဘွားကြီးဗျ တော်တော်လက်သွက်တယ်ဗျာ အနားဝန်းကျင်ကြည့်တော့ ကျေးဇူးရှင် လုံခြုံရေးတွေက တယောက်မှကို မရှိဘူး အဲဒါနဲ့ မနေတတ်မထိုင်တတ် သွားဝင်ဆွဲတယ်ပေါ့ဗျာ .. အဲဒီတော့မှ အဘိုးကြီးက မင်းနောက်မဆုတ်ရင် မင်းကို ထိုးမယ်တဲ့ ကျနော်လည်း ပါးစပ်လေး အဟောင်းသားနဲ့ ဘုရား တလိုက်ရတာပေါ့ ဘယ့်နှယ် ကိုယ်နဲ့မဆီမဆိုင် တော့ မခံနိုင်ပေါင် ကျနော်လဲ သင်ထားတာတွေက အလကား မဟုတ်ပဲလေ နောက်ကို အသာလေးလှမ်း လောက်ကို ဆုတ်ပလိုက်တယ် စက်ကွင်းက လွတ်ပီလေ :D နောက်တော့မှ ရေဒီယိုနဲ့ခေါ်တော့မှ ကိုယ်ရွှေချော လုံခြုံရေးတွေ အသည်းအသန်ရောက်လာပီး ဆွဲတယ်။ နောက်တော့ ကျနော့်ကို မေးလိုက် မြန်းလိုက်တာ တရားခံအတိုင်းပဲ ဘာမှ ကို မဟုတ်ပဲ အမှုတွဲထဲ ၀င်ပါနေတာလေ။ စိတ်ညစ်ပါတယ်။ ညနေ အလုပ်ပီးလို့ အွန်လိုင်းတက်တော့လည်း ညီကို တွေ့တာနဲ့ ကိုယ်က ကောင်းကောင်း သြ၀ါဒပေးနေတာ ပီးတောင် မပီးသေးဘူး ဟိုဘက်က အင်းမလုပ် အဲမလုပ် Reply မလာလို့ မသင်္ကာတာနဲ့ အပေါ် ဘားလေးကို ကြည့်တော့မှ သင်းက အောက်သွားပီ ဘယ်ရမလဲ ဖုန်းမဆက်ချင်လို့ ဒီမှာ ပြောတာကို အောက်သွားတော့လည်း ဖုန်းဆက်ပီး ပြောရတာပေါ့ အဲဒီတော့မှ သင်းက ပြောတာက အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ကိုးနတ်ချင် ဒေါင်းသွားလို့တဲ့။ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ လို့ တရုံမှ တပါး တခြား မရှိတော့ပီလေ။ ဒီမှာကလဲ ရေလည်ခေါင် လိုင်းက မိတချက် မမိတချက်နဲ့ ညကလည်း နက်နေပီဆိုတော့ ဟင်းး လို့ သက်ပျင်းချပီး အိပ်တာပဲ အေးချမ်းတယ်လို့ သဘောပိုက်ကာ စောစောစီးစီး လိမ်မာလိုက်ရတော့တာပေါ့ဗျာ။ လွဲလိုက်တဲ့ အလွဲတွေနော် …..
0 comments Posted by မိုးပြေး at 12:29 PM
0 comments Posted by မိုးပြေး at 11:14 AM
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 7:40 AM
အားလုံးကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကျနော့ရဲ့ အခန်းငယ်လေးဟာ တဦးတည်းပိုင် မဟုတ်တော့ ပါဘူး။ မိုးပြေးဆိုတဲ့ ကျနော့် သူငယ်ချင်း တယောက်ပါလာပါပီ။ အရာရာကို တယောက်တည်းလုပ်ရမှာ ပျင်းတဲ့ ကျနော် သူငယ်ချင်းမင်တဲ့ ကျနော်ဟာ ထုံးစံအတိုင်းတူတူ လုပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာ တွေ ရေးရမှာ ပျင်းတဲ့ကျနော့ (ရေးကိုမရေးတတ်တာ :D) ဘလော့ဂ်လေးမှာ မိုးပြေးက ကဗျာ တွေကို အလျှင်းသင့် သလို တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် သူငယ်ချင်းကို အားပေးပါဦးလို့။
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 8:13 AM
နေ့လည် ဘရိတ်ခ်ရတော့ ကော်ဖီ သောက်ရန် စိတ်ကူးရတာနဲ့ ကျနော်ဟာ Cafeteria ကို တက်သွားခဲ့ပါတယ် ကော်ဖီပူပူ တခွက်ယူပီး ထိုင်ခုံမှာသွားထိုင်ကာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ကြည့်တော့ အပြင်ဘက်မှာ မိုးတွေ ညို့ နေတာတွေ့ပါတယ်။ ကျနော်လဲ ကော်ဖီခွက်ဆွဲကိုင်ကာ Deck အပေါ်ဆုံးရှိ Bay Watch ကို ပြေးတက်ခဲ့ပါတယ်။ Bay View က ခုံတခုံမှာ အကျ အန နေရာယူကာ ရွာသွန်းတော့မယ့် မိုးရိပ်နဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကို ကြည့်ကာ မျက်စိ အရသာယူမိပါတော့တယ်။ ကျနော်ကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲ မိုးစက်လေးတွေ တဖွဲဖွဲကျလာပါတော့တယ်။ ဟိုးအဝေး မျက်စိ တဆုံးမှာ မြင်ရတာက ဆုံးသွားပီလို့ထင်ရတဲ့ မိုးကုတ်စက်ဝန်း၊ ကျနော်တို့ရဲ့ အမိသင်္ဘောဝန်းကျင် ရဲ့ ပတ်လည်မှာတော့ ၀ိုင်းရံထားတဲ့ပင်လယ်ပြင်ရဲ့ ရေအရောင်ဟာ မိုးတိမ်တွေကြောင့်၎င်း၊ မတူညီတဲ့ ပင်လယ် ရေစီးကြောင်းတွေကြောင့် တဖုံ၊ အစိမ်း အပြာ ရောင်စုံခြယ်လျက် အုံ့မှိုင်းနေတဲ့ မိုးကောင်းကင်ရဲ့ အရောင်နဲ့ ပနံရနေပါတယ်။်
ပင်လယ်ပြင် အကျယ်ကြီးထဲမှာ မိုးက အပြည့်ရွာတယ် ဆိုတာ ရှားလှပါတယ်။ ဟိုတကွက် ဒီတကွက် ကွက်ကျား မိုးသာ ရွာတာ အများအားဖြင့်တွေ့ဖူးပါတယ်။ မိုးရွာတဲ့ တကွက်က ရွာ မရွာတဲ့နေရာက မရွာနဲ့ တော်တော်ကို ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်လဲ ကြည့်နေရင်းနဲ့ အတွေးက ငယ်ငယ်တုန်းက အချိန်ကို ပြန်ရောက် သွားပါတယ်။ ကျနော်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက မိုးရာသီကို အလွန်နှစ်ခြိုက်ပါတယ် မိုးရွာပီလားဟေ့ ဆို ဘောလုံးကိုယူပီး လမ်းပေါ်ပြေးဆင်းတော့တာပဲ သူများတွေက မိုးသည်းတဲ့အထိစောင့်ကြတယ်လေ။ အဲဒီလို ပြေးပြေးဆင်းတတ်လို့လည်း တခါတခါ မိုးက မသည်းပဲ ပြန်တိတ်သွားတဲ့အခါ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ အိမ်ပေါ် ပြန်တက်ရပေါင်းမနည်းပါဘူး ဒါလဲ အမှတ်မရှိခဲ့ဘူးလေ နောက်တခါရွာပီဆို ဆင်းတာပါပဲ။ မှတ်မှတ်ရရ ကျနော် ပထမနှစ်ကျောင်းသား ဘ၀အထိ မိုးရေထဲ ဘောလုံးကန်တုန်းပါပဲ။ နောက်တခုက ကျနော်ဟာ ကြာဇံဟင်းခါး၊ မုန့်တီ၊ ရှောက်သီးသုပ် အတော့်ကို ကြိုက်ပါတယ် မိုးတွင်းမှာ ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေမှာ လိုက်စားလေ့ ရှိပါတယ်။ ကျနော့သူငယ်ချင်းတွေက တကောင်မှ မစားဘူးလေ မိန်းမစာတဲ့ စပ်လွန်းလို့တဲ့ တခါကျနော် အတင်းစားခိုင်းတာ ဒီကောင်တွေ ၀မ်းပါပျက်လို့ ဒုက္ခအတော်များသွားတယ်။ နောက်ပိုင်းကျနော်စားချင်တဲ့အခါ လိုက်တော့ ပို့ရှာပါရဲ့ ဘေးမှာပဲ ငုတ်တုတ်လေးတွေ ကျနော်စားတာ ထိုင်ကြည့်ရရှာတယ်။ နောက် ကျနော် နဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတယောက် မိုးရွာတုန်းမှာ ခရေပင်လမ်းမှာ တကူးတက သွားပီး လမ်းလျှောက်ဖူးတာလဲ အမှတ်တရပါပဲ။ မိုးရွာထဲမှာ လမ်းလျှောက်ရတာကို တကယ်ပဲ နှစ်သက်လှပါတယ်။ အများအားဖြင့် ကျနော် ဟာလဲ ထီးယူလေ့ ယူထ မရှိတဲ့ လူငယ်တယောက်ပါပဲ။ အဲဒီလို ထီးမယူသွားလို့ မိုးရွာတဲ့အခါ Style ဘယ်လောက်ပဲ့ပဲ့ မိုးရွာထဲမှာ လမ်းလျှောက်ပါတယ်။ တခါကလည်း ကားနဲ့ အင်းလျားကန်ဘောင်ရှေ့က ဖြတ်တုန်း မိုးရွာတာနဲ့ ကျနော်တို့ တဖွဲ့လုံး ကားရပ်ပီး မိုးရေထဲ ဆင်းဆော့တာလဲ တကယ့် ကို ပျော်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။ အပြင်မထွက်ချင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ ကော်ဖီခါးခါးတခွက်ဖျော်ပီး မိုးသံလေသံတွေကို နားအရသာခံရင်ခံ မခံရင် စာအုပ်တအုပ်နဲ့ ငြိမ့်နေတတ်တာပါပဲ။
တွေးနေရင်းက လေကြောင်းပြောင်းလို့ မျက်နှာကို လာစင်တဲ့ မိုးစက်အေးအေးတွေကြောင့် လန့်ဖျပ်ပီး နာရီကို ကြည့်တော့ ဘုရားရေ ဘရိတ်ခ်ပြည့်လို့ ၃ မိနစ်တောင်စွန်းနေပီ ဘေးက ကော်ဖီအေးအေးကို တကြိုက်တည်း မော့ကာ ပြေးဆင်းခဲ့ပါတော့တယ်။ အင်း နောက်တဘရိတ်ခ် လဲပေးရမဲ့ လူကတော့ ဆဲတော့မှာပဲ လို့ ကြိုတွေးရင်း အမောတကောနဲ့ အလုပ်ပြန်ဝင်လုပ်ရပြန်တော့တာပေါ့ဗျာ။
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 10:14 PM
Sweet December တဲ့ … ကျနော့ အတွက်တော့ မထူးခြားလှပါဘူး ကျနော်ကတော့ ဆောင်းရာသီထက် မိုးရာသီ ကို ပိုသဘောကျမိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆောင်းရာသီကိုလည်း နှစ်သက်ပါတယ် ဆောင်းတွင်း မနက်ပိုင်းမှာ မြူတွေ လွှမ်းပီး ချမ်းစိမ့်စိမ့်နဲ့ အိမ်ရှေ့ထွက်ထိုင်ရတဲ့ အရသာ ကို ငယ်ငယ် က အရမ်းပဲ ကြိုက်နှစ်သက် ခဲ့တာပေါ့။ ညနေပိုင်း အေးလာပီဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စက်ဘီးကို လမ်းပတ်ပီးစီးကြ၊ ကြက်တောင် ရိုက်ရတာလဲ အမောပါ ဒါတွေကို ပြန်လွမ်းမိပါရဲ့။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေ က နှင်းတွေဖုံးနေတဲ့ လမ်းတွေ အိမ်တွေ ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို ကြည့်ပီး ငါလဲ တနေ့ အဲဒီလိုနေရာမျိုးမှာ သွားနေမယ်ဆိုပီး စိတ်ကူးခဲ့ဖူး တာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပါ (စိတ်ကူးတာပဲ ပိုက်ဆံပေးရတာမှ မဟုတ်ပဲနော်)။ ဒီဇင်ဘာဟာ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် လူမျုိုးတွေရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ လ တလဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဘုရားသခင်မွေးနေ့ Christmas Day ဟာလည်း ဒီလ ထဲမှာပဲ ကျရောက်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ဒီဇင်ဘာလဟာ နှစ်တနှစ်ရဲ့ အဆုံးသတ်လ ဆိုလဲ မမှားပါဘူး နှစ်ဟောင်းကို စွန့်ထားခဲ့ပီး နှစ်သစ်ကိုကြိုဖို့ အတွက် ကျရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ဒီလမှာ အလုပ်ပိတ်ရက်တွေ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ များတာကြောင့် မိသားစုတွေ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ခရီးထွက်စရာ လကလေး တလ ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
ကျနော့်တို့ သူငယ်ချင်း တွေ အတွက်ကတော့ ဒီဇင်ဘာ ကျရောက်လာတာဟာကျနော်တို့ရဲ မြန်မာ နှစ်ကူး ပွဲတော်ဖြစ်တဲ့သင်္ကြန်ပွဲတော် ကျင်းပချိန် ဧပြီ လကို ရောက်ရှိရင် ပျော်သလို ခံစားရပါတယ် ဘာလို့ဆိုတော့ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်း တစုဟာ ဒီရာသီ ဒီအချိန် ကိုရောက်ပီဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေ အားအား မအားအား .. အားအောင်လုပ်ကာ ခရီးထွက်လေ့ ရှိလို့ပါပဲ။ ဒီဇင်ဘာ မရောက်ခင်ကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေ စုမိရင် ခရီးထွက်ဖို့ပဲ ညှိုနှိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ တယောက်မပါရင်မဖြစ်အောင် မအား အားတဲ့အထိစောင့်ကာ သွားဖြစ်အောင် သွားလေ့ရှိကြပါတယ်။ သွားလေ့ ရှိတာကတော့ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားပါပဲ။ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူးခရီးဟာ သိပ်မဝေးတဲ့အပြင် ကုသိုလ်လဲရ ပျော်စရာလည်း ကောင်းတဲ့အပြင် တောတောင် ရေမြေ သဘာဝအလှတွေကို တ၀ခံစား နိုင်လို့ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အမြဲ ရွေးချယ်မိတဲ့ နေရာပါပဲ။ နှစ်တိုင်း ရောက်နေပေမဲ့ မရိုးသွားပါဘူး တခေါက်နဲ့ တခေါက်ဟာမရိုးနိုင်ပဲ အမြဲ ပျော်ရပါတယ်။ ကျနော့်အတွက်ကတော့ ကျနော် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နောက်ဆုံး သွားခဲ့တဲ့ ခရီးက ၂၀၀၅ ဒီဇင်ဘာ ပါပဲ။ ကျနော်တို့ဟာ ဒီဇင်ဘာရောက်ပီဆိုတာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ တိုင်ပင်ပီး လူသိပ် မများခင် ဒီဇင်ဘာ အစောပိုင်းကို ခရီးထွက်လာကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်း ကိုးယောက် နောက် ကျနော်တို့ကို ဦးဆောင်ပီး လိုက်ပို့ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း အောင်ကျော်သူရဲ့ အဖေ အမေ အမ တို့ သုံးယောက်ပါ ပါတယ်။ ဒီလို လူကြီးတွေနဲ့ သွားလို့ ကျနော်တို့ မလွတ်လပ်ဘူး လို့ ထင်လိုက်လား။ မဟုတ်ပါဘူး အရမ်း အရမ်းကို လွတ်လပ်ပါတယ်။ တကယ့်ကိုပါပဲ လူကြီးတွေပါလာတော့ ကျနော်တို့အတွက် ၀မ်းရေးကိစ္စက ကိုယ့်ဘာသာ စီစဉ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ မောမောပမ်းပမ်းနဲ့ လျှောက်လည် ပီးရင်ပြန်လာရင် ထမင်းဝိုင်းက အသင့် လက်ဆေးပီး စား၊ စားပီးရင်လဲ လက်ဆေးပီး ထသွားရုံပါပဲ တကယ့်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဦး နဲ့ အန်တီပါ ကျနော်တို့ကို သူတို့ရဲ့ သားအရင်းတွေလိုပဲ ချစ်ကြတာပါ။ ကျနော်တို့ ပေါင်းခဲ့တဲ့ သက်တမ်းကလည်း မနည်းပဲကိုး ကျနော်တို့ ဟို ၂ တန်းကတည်းက စပေါင်းလာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေချည့်ပါပဲ ကျနော်ခု နိုင်ငံခြား မထွက်ခင်အထိကို တတွဲတွဲနေ့တိုင်း တွေ့နေကြ သူငယ်ချင်းတွေပါ။ ဦး နဲ့ အန်တီဟာ ရသေ့တောင် မှာ ဘုရားတည် ထားတဲ့ ဒကာတွေဖြစ်တာကြောင့် ကျိုက်ထီးရိုးရောက်တိုင်း ရသေ့တောင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲ တည်းခိုလေ့ရှိပါတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူးတွေဟာ ရသေ့တောင်မှာ တည်းခိုးလေ့ အတော့ကို နည်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ သွားတုန်းကလည်း ကျနော်တို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားကို သွားဖို့ ခရီးထောက်ပေမဲ့ တကယ့်ကို အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်ပီး နေထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ နေရာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေ တက်တော့ လူငယ်ပီပီ ကားနဲ့ပဲ တက်ခဲ့ကြပါတယ် :D။ ရသေ့တောင် ကားရပ်စခန်းရောက်တော့မှသာ ကျနော်တို့တွေ ရသေ့တောင်ကို ခြေလျှင်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ (အခု အချိန်ဆိုရင်တော့ စည်နေလောက်ပီထင်ပါရဲ့ ရသေ့တောင် ပေါ်အထိ ကားလမ်းပေါက်နေပီ လို့ ကြားပါတယ်။) ဒါတောင် ရသေ့တောင်ပေါ်တက်တဲ့ လမ်းမှာ ညည်းတဲ့ လူက ပါ ပါသေးတယ်။ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်း မင်းမင်း ဆိုတဲ့ ဖက်တီးပေါ့ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ် ကျနော် တို့တွေက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးတက်နေပေမယ့် သူ့ခမျာ မပေါ့မပါးနဲ့ :D တက်နေရတာဆိုတော့ သနားမိပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်း ကျိုက်ထီးရိုး တက်ရတဲ့ အရသာလေးကို အပြည့်အ၀ မရတောင် တစွန်းတစ ရကောင်းရဲ့ ဆိုပီး တက်ခဲ့ကြတာပါ သူကလည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပါပဲ မရရအောင် တက်ရှာပါတယ်။ ရှေ့က ကြိုကြိုရောက် နေတဲ့ ကျနော်တို့က နောက်ကနေ အိပဲ့ အိပဲ့ နဲ့တက်လာတဲ့ သူ့ကို စလိုက် စောင့်ရင်းနဲ့တက်လိုက်နဲ့ တောင်ပေါ် ရောက်လာပါတယ်။ တောင်ပေါ်ရောက်တော့လည်း မောလာသမျှဟာ ပတ်ဝန်းကျင် သဘာဝရှုခင်း တွေရဲ့ လှပမှုကြောင့် ပြေပျောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ရသေ့တောင်ကနေ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကို လှမ်းဖူးရတာလည်း တမျိုးပါပဲ။ ကျနော်တို့ ရသေ့တောင်ဆရာတော်ကို ဖူး ပီးနောက် ခေတ္တခဏ အနားယူပီးတဲ့အခါ ရေချိုး ကြပါ တယ်။ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်မှာ ရေရှားလှပါတယ် ၀ယ်ချိုးတာတောင်မလောက်ပါဘူး ကျနော်တို့ ရသေ့တောင် ပေါ်မှာတော့ ကျောက်ကန်ကြီး နဲ့ နှစ်ကန်အပြည့်ပါပဲ ရေကလည်း တောင်အောက်က စမ်းရေကို မော်တာနဲ့ တင်တာဖြစ်တာကြောင့် အေးမြနေတဲ့ စမ်းရေအေးအေးလေးကို တ၀ ချိုးမိကြပါတယ် အဲဒီအခါမှပဲ တနေကုန် ပင်ပမ်းထားတာတွေဟာ ယူပစ်သလို ပျောက်ပီး လန်းဆန်းသွားပါတော့တယ်။ ကျနော်တို့ ကျိုက်ထီးရိုး တောင်ပေါ်တက်တာ ညနေ ၅ခွဲမှာပါ ပုဆိုးလေးတွေနဲ့ပေါ့ အေးအေးဆေးဆေး တက်ခဲ့တာ ညနေ ၇ နာရီ လောက်မှ တောင်ပေါ်ရောက်ပါတယ်။ ဘုရားဖူး ဈေးခင်းလျှောက် နားနားနေနေ နေပီး ပြန်ဆင်းလာတာ ည ၁၀နာရီပါ။ ဒီအချိန်မှ ဆင်းတဲ့သူဆိုလို့ ကျနော်တို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုးအဆင်းက အဲဒီလောက်ကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ ရသေ့တောင် အတက်မှ စတွေ့တာပါပဲ မှောင်မဲနေတဲ့ တောလမ်းကို ည ၁၁ နာရီလောက် မှာ သူငယ်ချင်းတွေ ဟိုပြောဒီပြော ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ပြန်တက်ခဲ့ကြတာပါ ဖက်တီးတို့က ဒါမျိုးကျတော့ ရှေ့ဆုံးက တက်တယ်ခင်ဗျ :D ပြန်ရောက်တော့ အားလုံး ပေတေညစ်ပတ်နေကြပီ အဲဒါနဲ့ ခြေဆေးလက်ဆေးပီး တော့ မအိပ်ကြပဲ နဲ့ ရန်ကုန်ကတည်းက အစီအစဉ်ဆွဲပီး ယူလာတဲ့ ဖဲထုပ်နဲ့ ဖဲရိုက်ကြတယ် ခင်ဗျ :D ဘူကြီး ၂၁ ကို ၅ ကျပ်ကြေးရိုက်ကြတာ မနက် လေးနာရီကို ခွဲပါရော လား ဆော့တာက အိမ်ကို ငါးကျပ်တန် တအုပ် ၁၀ တန်တအုပ် ၂၀ တန် တအုပ် လဲခိုင်းထားတာနဲ့ ဆော့တာ .. အိမ်ကတော့ လှူဖို့ထင်တာပေါ့ ကျနော်က နဂိုတည်းက အကြံကြီးကြီးနဲ့ ဆော့ဖို့လဲတာခင်ဗျ အဟဲ လှူဖို့လည်းပါတာပေါ့နော် လှူတာက ဒီထက်အတန် ကြီးပါတယ် :D ကျနော်တို့ အဲလို ဆော့တာ ညတိုင်းပါပဲ အဲဒီတခေါက်တုန်းက ကျနော်တို့အတွက် အမှတ်တရ က လမ်းမှားပီ စွန်တောင်ကို ရောက်သွားတာပါပဲ မြစိမ်းတောင်ကို သွားရာကနေ စွန်တောင်မှ ကြိုဆိုပါ၏ ဆိုတဲ့ မုခ်ဦးတွေ့လို့ နီးနီးလေး ထင်လို့သွားလိုက်တာ အားပါး ဘယ်နှစ်မိုင်မှန်းမသိပါဘူး လျှောက်လိုက်ရတာဆိုတာ တအုပ်စုလုံးက အလျှော့မပေးချင်လို့သာ အားတင်းပီး လမ်းဆုံးမှ ရပ်မယ်ဆိုပီး တက်ခဲ့ကြတာ လမ်းမှာလဲ လူက မရှိ လမ်းမှားတယ် ထင်ရလောက်အောင်ပါပဲ သုံးနာရီလောက် လျှောက်ပီးမှသာ တောင်ထိပ် ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ် စွန်တောင် စေတီနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပါတယ်။ ရှုခင်းကတော့ တကယ့်ကို တန်ပါတယ် တက်ခဲ့ရတာနဲ့ နောက် အောက်ပြန်ဆင်းတဲ့အထိ မခံနိုင်တော့တဲ့ ဗိုက်ပြသနာကို စွန်တောင် ဘုန်းဘုန်းဆီမှာပဲ သီးစုံဟင်းနဲ့ အပီလွေးခဲ့ပါတယ်။ မောကလည်းမော တော်တော်ဟာနေတဲ့ဗိုက်ကို တယောက် သုံးပန်းကန်လောက်စီ ဖြည့်လိုက်တာ ဘုန်းဘုန်းက တော်တော့ကို သဘောကျပါတယ် :D။ နောက်တခုက ကျနော်တို့ ပြန်လာတော့ ရန်ကုန်ကို ည ၈ နာရီလောက် အမှီ ပြန်မောင်းလာတာကြောင့် လမ်းမှာမနားပဲ တောက်လျှောက် ပဲခူးရောက်မှ သာ တထောက်နားခဲ့ကြတာပါ ပဲခူးရောက်တော့ ညနေ ငါးခွဲ ဗိုက်တွေက တော်တော်ဆာနေပီ အကုန်လုံးက ညည်းနေတာကြောင့်ကတကြောင်း ရန်ကုန်ကို ခရီးကသိပ်မလိုတော့တာ တကြောင်းကြောင့် ပဲခူးက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ တထောက်နားပီး ဗိုက်ဖြည့်ကြပါတယ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလဲ ညနေ ပိတ်ခါနီးဆိုတော့ ကာ ပေါက်စီ နဲ့ လက်ဖက်ရည် အပြင် တခြား ဘာမှကို မရှိတော့တာပါ။ ကျနော်တို့ ဆာဆာနဲ့ ပေါက်စီ စားကြ တာ တယောက်ဘယ်နှစ်လုံးလဲ သိလား :D လေးလုံးခင်ဗျ ကိုးယောက်ကို တယောက်လေးလုံး တွယ်လိုက်တာ ၃၆ လုံး ကုန်ရော .. အနီး ၀န်းကျင်က လူတွေကလည်း တအံ့တသြပေါ့ ဘယ်က အငတ်တိုင်းပြည်က ရောက်လာလဲဆိုတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်ကြတာပေါ့ ဂရု မစိုက်ပါဘူး ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိကိုး .. သုံးလုံးလောက် ကုန်ပီးလေးလုံးမြောက်မှသာ အိနြေ္ဒ ရှိရှိ နဲ့ နောက်ဆုံးအလုံးကို စားနိုင်တာပါ :D ရန်ကုန်ကို ၀င်တော့ မှောင်နေပါပီ ဗိုက်ပြည့်တော့ ခုနက တိတ်နေတဲ့ ကျနော်တို့ဟာ ဟိုတပေါက် ဒီတပေါက်ငြင်းခုန်ရင်း အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီခရီးစဉ်မှာ ကုန်ခဲ့တာက ဖလင် ရှစ်လိပ်ပါ တကွက်မှ မပိုပါဘူး သွားတာက ယောကျာ်းလေး ကိုးယောက် .. ဒါတောင် ဓာတ်ပုံရိုက်တာ မကြိုက်ဖူးပြောတဲ့ ကောင်ကပါသေးတယ် ပီးတော့ သူပဲ အများဆုံးပါပဲ။ အဟဲ သူများတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ အဲဒါ ကျနော်ပဲ :D။
တကယ့်ကို အမှတ်ရစရာတွေပါ ပီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကတော့ ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်နဲ့ သင်္ဘောပေါ်မှာပဲ ကျနော့်ရဲ့ ဒီဇင်ဘာဟာ ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ် ဒီနှစ်လဲ ဘာထူးလဲ ဒီလိုပါပဲ မနက်ဖြန် သန်ဘက်ခါ ဆို ဒီကောင်တွေ သွားပါတော့မယ် မနေ့ တနေ့က သူငယ်ချင်းတွေ G-talk မှာ တွေ့တော့ ပြောတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ချက်ချင်း ပြန်ချင်စိတ်ကို မနည်း ထိန်းထားရတယ် .. သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ပြောပါတယ် ရှေ့နှစ် ပြန်လာပေါ့ တဲ့။
ကဲ 2008 ဒီဇင်ဘာကိုသာ စောင့်မျှော်ရင်း သူငယ်ချင်းတွေ ပို့ပေးမဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ စောင့်ရင်း ကျနော့်ရဲ့ ပျင်းရိစရာ ဒီဇင်ဘာညတွေကို ဖြတ်သန်းရဦးမှာပေါ့ ။
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 10:55 PM
White Lady - အဖြူရောင် အမျိုးသမီး ဟုတ်တယ်ဟုတ် ။ နာမည်လေးကတော့ လှပ ရိုးရှင်းပီး နှစ်လိုဖွယ် ကောင်းလှပါတယ်။ အဲဒီ လှပ ရိုးရှင်းတဲ့ နောက်ကွယ် ကန့်လန့်ကာက ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဆန့်ကျင်ဖက် ပါပဲ။ ဟုတ်ကဲ့ ဘာကြောင့် ဆန့်ကျင်ဖက် အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ကျနော် ခု ပြောပြမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျနော် ဒီသင်္ဘောမှာ အလုပ်လုပ်တာ ၁နှစ်ခွဲ ကျော်လာပါပီ။ ၁နှစ်ခွဲကျော် လာတယ်ဆိုပေမဲ့ ကျနော်ဟာ ကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စကလွဲလို့ အပြင်ကိစ္စတွေမှာ အာရုံစူးစိုက်မှု နည်းခဲ့ပါတယ်။ အခုလို တကယ့်ပြင်ပလောကနဲ့ အထိအတွေ့ နည်းနေချိန်မှာ ကျနော်ဟာ ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာလဲ သင်္ဘောပေါ်က လူတွေရဲ့ သတင်းလောကနဲ့ အဆက်ပြတ်နေတယ်ဆိုတာ ဒီနေ့ မနက်မှပဲ ကိုယ့်ဘာသာ သိလိုက်ရပါတယ်။
အဆက်အသွယ်ပြတ်တာလဲ မပြောပါနဲ့ ကျနော်ရဲ့ ပင်ကိုယ်ကိုက အေးအေးနေတတ်တာကြောင့်လဲပါ ပါတယ်။ ရောက်စ ဒီက လူတွေနဲ့ သိပ်မသိခင်တုန်းကလည်း ကျနော်ဟာ ကိုယ့်ဘာသာ ဖာသီးဖာသာ နဲ့ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ချိန် အလုပ် လုပ်ပီး နေ့ရက်တွေ ကုန်ဆုံးလွယ်အောင်ဆိုတဲ့ ရူးကြောင်ကြောင် အတွေးအခေါ်နဲ့ အလုပ်ပီးတာနဲ့ အိပ်တာ များပါတယ်။ နိုးလာတဲ့ အချိန်မှာလဲ တယောက်တည်း ပင်လယ်ကြီးကိုငေးပီး အတွေးတွေနဲ့ ကုန်ခဲ့တဲ့ အချိန်ဟာ များပါတယ်။ အဲ အချိန်အနည်းငယ် ကြာလို့ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေ ရလာတော့လည်း သိပ်မကွာခြား လှပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ ဘရိတ်ခ်နားချိန် ရတဲ့ နာရီဝက် သို့မဟုတ် ၂၀ မိနစ်မှာပင် ကျနော်ဟာ လူအများစု နားနေတဲ့ ကဖေးတီးရီးယားလို နေရာမျိုးမှာ အနားမယူပဲ အခန်းသာ ပြန်ပီး နားလေ့ ရှိပါတယ်။ အခန်းဖော်က အိပ်နေရင် လည်း ဒီအတိုင်းအမှောင်ထဲမှာသာ ငုတ်တုတ်ပေါ့။ နောက်ပိုင်း ကွန်ပျူတာ ၀ယ် အင်တာနက်သုံးတော့ ပိုဆိုးတာ ပေါ့ လုံးဝကို အပြင်နဲ့ အဆက်ပြတ်သွားတာ။ အခု မနက်မှ ကိုယ့်ဘာသာ သိလိုက်ရတယ်။ ကာစီနိုမဖွင့်ခင် လူကြီးတွေစကားပြောနေလို့ အနားကဖြတ်သွားရင်း အမှတ်မထင်ကြားလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် ကိုယ်လဲ သူတို့ စကားဝိုင်းထဲ ရောက်သွားတော့တာပေါ့။ ပြောတဲ့ အကြောင်းက ဘုရားရေ .. သရဲ ရှိတယ်တဲ့။ ဟုတ်မှာပါ ကျနော် တို့ သင်္ဘောသက်တမ်းက ၁၀ နှစ်ရှိပါပီ။ ကျနော်မရောက်ခင်ကတည်းက ဟိုးအရင်ကတည်းက အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် သင်္ဘောပေါ်မှာပဲ အသက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ ခရီးသည်တွေ ၀န်ထမ်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ရှိပါတယ်လို့ ပြောကြသော်လည်း မတွေ့တာက တကြောင်း အဲဒီလောက်ကြီး စိတ်မ၀င်စားတာကြောင့်လည်း အာရုံမစိုက်ခဲ့ ပါဘူး။ ခုဟာက တော်တော့ ကို ထူးဆန်းနေပီး။ လူအတော်များများလဲ ခံရပီး ဖြစ်တာကြောင့် ကျနော် ကိုယ်တိုင် လဲ စိတ်ဝင်စားခဲ့ရတာပေါ့။ သူတို့ ပြောနေတာတွေ နားထောင်ပီး ခံရတဲ့သူတွေက ဘယ်လိုနေတယ်မသိ။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်တော့ ကြက်သီးအနည်းငယ်ဖျန်း မိသွားတာတော့ မရှက်မကြောက် ၀န်ခံရမှာပါ။ ထူးဆန်းတာက ဒီသရဲခြောက်တာက ဖိလိပိုင် လူမျိုးတွေချည့်ပဲဖြစ်လို့ ဖိလိပိုင်သရဲမလို့တောင် ပြောကြရတဲ့ အထိပါပဲ။ ပထမဆုံး အခြောက်ခံရတာကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ စာရင်းဇယားတွေ လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် စာရေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဖိလိပိုင်လူမျိုး အမျိုးသမီးပါတဲ့။ ညဘက် သူအလုပ်လုပ်နေတုန်း (ညဘက်ဆိုပေမဲ့ သင်္ဘောထဲမှာ နေ့မှန်းညမှန်းမသိ အမြဲ လင်းထိန်နေတာမို့မကွာပါဘူး) အဲကွန်းရှိရက်နဲ့ ပန်ကာထပ်ဖွင့်ထားပါတယ် အဲဒီ စာရေးမက .. ပြသနာက အဲဒီမှာ စတာပါပဲ ရုံးခန်းမို့ စာရွက်တွေရှိမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ရလောက်ပါတယ်။ ပန်ကာလေကြောင့် စာရွက်တွေ လွင့်တာဟာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကျတော့ ဆန်းပါတယ် မြောက်သွားတဲ့ စာရွက်တွေဟာ ပြန်ကျလာတဲ့အခါ လေအဟုန်မရှိတော့တာကြောင့် ဖြေးဖြေးလေးပြန်လွင့်လာရမှာပါ ဒါပေမဲ့ လူတယောက်က စာရွက်ကို လက်နဲ့ကိုင်ချသလိုကို အမြန် ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ် ကျလာတာပါတဲ့။ သူလဲ သင်္ကာမကင်း ဖြစ်လို့ အနားသွား ကြည့်မယ်ကြံတော့ ပန်ကာ ခလုတ်တွေဟာ ပြေးနေပါတယ်တဲ့ နောက် Swing လုပ်ထားတဲ့ ပန်ကာကို လူတယောက်က ကိုင်ထားသလို ရပ်နေပီး အသံတွေထွက်နေတာနဲ့ အဲဒီအမျိုးသမီးလည်း မနေရဲ တော့ပဲ ဆင်းပြေးလာရပါတယ် ဒါက ပထမဆုံးအဖြစ်အပျက်ပါ။ နောက် တယောက်က ကျနော်တို့ရဲ့ Senior Supervisor ဖိလိပိုင်လူမျိုးပါပဲ သူဟာ ညဘက် ရုံးခန်းထဲမှာပဲ ကွန်ပျူတာတလုံးနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတုန်း တိတ်ဆိတ် နေတဲ့ အခန်းမှာ နာရီက စက္ကန့်သံသွားတာ တချပ်ချပ် ကြားရမှာ ပုံမှန်ပါ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ တချပ်ချပ်ဟာ သူပြောပုံအရဆို အတော့်ကို ဆူညံတဲ့အထိ ဖြစ်လာတယ်လို့ ပြောပါတယ် နောက် သူသွားပီး ဖြုတ်ကြည့် ပြန်တပ်ကြည့်တော့မှ ညိမ်သွားပါတယ်တဲ့ နောက် သူအလုပ်ဆက်လုပ်နေတုန်း သူ့နားရွက်နားကို လေနဲ့ ကပ်မှုတ်သလို ခံစားရပါတယ်တဲ့ နောက် လေချွန်သံလိုမျိုးလဲ ကြားရပါတယ်တဲ့ တဆက်တည်း သူ အလုပ် လုပ်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာ ပါ ပိတ်လိုက် ဖွင့်လိုက် ဖြစ်နေလို့ သူမကြောက်ပေမဲ့ ဆက်နေဖို့ မရဲတာကြောင့် ပြန်ဆင်းလာတယ်ဆိုပါတယ်။ နောက်ပိုင်းရက်တွေ သူသွားလုပ်ရင်လည်း တယောက်တည်း မသွားတော့ပါဘူး တယောက်ယောက် ခေါ်သွားလေ့ရှိပါတယ် အဲဒီတယောက်ကလည်း ဖိလိပိုင် လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံး ကတော့ မနေ့က တင်ပါ ကျနော်တို့ သင်္ဘောဟာ ကာစီနို ခရီးသည်တင် သင်္ဘောဖြစ်တာနဲ့အညီ နေရာတိုင်းမှာ နေရာမလပ် CCTV Coverage အပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညကတော့ CCTV Room မှာ တာဝန်ကျတဲ့ ဖိလိပိုင် အမျိုးသား တယောက်ဟာ အဲဒီဖြစ်ပွားတဲ့ ရုံခန်းမှာပဲ စက္ကူပုံးတွေ တင်တဲ့အပေါ်မှာ အဖြူရောင် ၀တ်ရုံရှည် ၀တ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ဟာ ဆံပင်အရှည်ကြီး ချပီး ခေါင်းငိုက်စိုက်ချကာ ထိုင်နေတာကို အမှတ်မထင် တွေ့လိုက်ရပါတယ်တဲ့ သူကလည်း ဒီနေရာဟာ ခရီးသည်တွေအတွက် ကန့်သတ်ထားတဲ့ နေရာဖြစ်လို့ ဘယ်သူမှ မသိပဲ ၀င်လာတဲ့ ခရီးသည် ဖြစ်တယ်ထင်လို့ ပြောဖို့ ထွက်ပီး အကြည့်မှာ မရှိတော့ပါဘူးတဲ့ ဒါနဲ့ သူလဲ ခုနက Recording လုပ်ထားတဲ့ အခွေကို ပြန်ရစ်ကြည့်ပါသတဲ့ လုံးဝကို အစအန မတွေ့ရတော့တာပါတဲ့ ခဏနေတော့ CCTV Room ကို တံခါးလာခေါက်ပါတယ်တဲ့ သူကင်မရာကနေကြည့်တော့ ခုန အမျိုးသမီး ပုံစံပဲ ဖြစ်လို့ သွားဖွင့်ကြည့်ပြန်တော့ မရှိပြန်ပါဘူး အဲဒါနဲ့ သူလဲ အနည်းငယ် တုန်လှုပ်လာပီး ရေဒီယိုကနေ တဆင့် ပြောတဲ့အခါ ရေဒီယို Volume ဟာ အဆမတန် ကျယ်လာပီး ဘာသံမှန်းမသိတဲ့ ဆူညံသံတွေ ၀င်လာပါတယ်တဲ့ နောက်ဆုံး သူလဲ အဖော်ကို ဖုန်းဆက်ကာ ခေါ်ရပါတော့တယ်။
ဒီ ဖြစ်ရပ်ဟာ ကျနော့ အနေနဲ့ တကယ်ဖြစ်တယ်လို့လက်ခံသည် ဖြစ်စေ လက်မခံဘူး ဖြစ်စေ တော်တော့ကို ထိတ်လန့်မိတာကတော့ အမှန်တကယ်ပါ သရဲကြောက်တယ်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး နားထောင်နေရင်းနဲ့ ကို အနည်းငယ် ကြက်သီး ထမိတာကတော့ အမှန်ဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်နေတဲ့ နေရာဝန်းကျင်ဖြစ်နေတာလည်း ပါတာပေါ့။ ကျနော်မရောက်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်ကလည်း ဖြစ်ဖူးပါတယ် အဲဒီတုန်းကတော့ ခရစ်ယန် ဘုန်းကြီးတွေရော တရုတ်ဘုန်းကြီးတွေပါ ခေါ်ကာ ဘုရားစာ ရွတ်ဖတ်စေပါတယ်တဲ့ ဒီတခါ ကတော့ ဘယ်လို လုပ်မယ်ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရင်း အဖြူရောင် အမျိူးသမီးနဲ့ တည့်တည့်မတွေ့ပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်း မိပါတယ် ဗျာ။
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 10:07 PM
ကျနော် ဒီနေ့ ဂျူတီကျတဲ့ Section က လူနည်းတဲ့ နေရာ ဖြစ်တာကတကြောင်း ဒီရက်ပိုင်း ခရီးသည် နည်းတာကက တကြောင်း (လာကစားသမျှလူတွေလည်း ကုန်ပီလေ) အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းတို့ ဖြင့် လူမရှိသော Section တွင် ကျနော် တယောက်တည်း ဖြစ်နေကာ အတွေးတို့က ဟိုရောက် ဒီရောက်ဖြင့် ဘ၀ ဆိုသော ခေါင်းစဉ်အောက်ရောက်သွားကာ အတွေးနယ်ချဲ့မိသည် နှင့် ကျနော် တို့ ရှင်သန်နေရ တဲ့ ဘ၀ ဆိုတာကို ဆွေးနွေးချက်တခုအနေနဲ့ ဆွေးနွေးချင်တဲ့ ဆန္ဒလေး တခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျနော် တို့ ၀န်းကျင် မှာ ကြားနေကျ ညည်းနေကျ အသံတွေ ခင်ဗျားတို့လည်း ကြားဖူးပါလိမ့်မယ် “ဘ၀” ဘ နှင့် ၀ နှစ်လုံးတည်း မို့ပဲ တော်တော့တယ် ဆိုတဲ့ စကားမျိုးလေ။ ဒီစကားလေးဟာ နောက်ပြောင် ပြောဆိုကျပေမဲ့ တကယ့် တကယ်မှာ ဟုတ်ပါတယ် တကယ့်ကို နှစ်လုံးတည်းမို့သာ တော်ပါရော့တယ် ဒီထက်များ တလုံးလောက် ပိုလာခဲ့ ရင် တွေးကြည့်တာနဲ့တင် အတော်ကို စိတ်ညစ်ညူးဖွယ်ရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ကျနော် ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ် တအုပ်မှာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဘ၀တွေဟာ စပီး အမိဝမ်းကနေ ကျွတ်လာကတည်းက အရာရာ အားလုံးဟာ အစီ အစဉ် တကျဖြစ်လာတဲ့ အရာတွေ ချည့်ပါပဲတဲ့။ ကျနော်လက်ခံပါတယ် ကျနော်တို့ဟာ တကယ့် အစီအစဉ် တကျ ရေးဆွဲထားတဲ့ လောက ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ကနေရတဲ့ သက်ရှိ ရုပ်သေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို လွယ်ထားရပီဆိုတာနဲ့ ကျနော်တို့ မိဘတွေမှာ ကျနော်တို့ အတွက် အစီအစဉ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဆေးရုံမှာ မွေးမယ် ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ အပ်မယ် အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ အိုကေ ကျနော်တို့ လူ့လောက ရောက်ရှိလာပါပီ ကျနော်တို့ ဘ၀အစ ကျောင်းတက်ရာကနေ ကျနော်တို့ နောက်ဆုံးခရီးအထိ အရာအားလုံးဟာ သူစီစဉ်ထားတဲ့ ဇာတ်ကွက်ထဲမျာ မျောပါသွားတာချည့်ပါပဲ။ ကျနော်တို့တွေမှာ လိုချင်တိုင်း တောင့်တတိုင်း ရရှိခဲ့ဖူးတာများ ရှိခဲ့ပါသလား။ ကျနော့် ဘ၀မှာတော့ မရှိခဲ့ဘူးဗျာ။ အဲလို လိုချင် တောင့်တတိုင်း ရှိခဲ့ပါတယ်လို့ ဖြေတဲ့လူရှိရင် ကျနော် တကယ့်ကို အားကျမိမှာပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ် ချွင်းချက်အနေနဲ့ အဲဒီလို လူမျိုးဟာ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ် အိုကေဗျာ ကျနော် တထစ်လျှော့မယ် ၉၉% ဟာ လိုတိုင်းတ တောင်းတိုင်းမရခဲ့ကြပါဘူး။ အဲဒီလို လိုတိုင်းတမယ် တောင်းတိုင်းသာ ရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ လူ့လောကကြီးဟာ တကယ့်ကို အေးချမ်းပီး ပျော်ရွှင်စရာကြီး ဖြစ်နေမှာပေါ့။ “စိတ်ညစ်လိုက်တာ” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ ပေါ်ပေါက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နပိုလီယံက ပြောပါတယ် “မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သူ့သမိုင်းမှာ မရှိဘူး” တဲ့ သူမသေဆုံးခင်အချိန်ထိ သူ့ဘ၀မှာ သူဖြစ်ချင် တာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရဲ့လား ဆိုတာ သူမှ ပဲ သိမှာပါ။ ကျနော်တို့ လက်တွေ့ ရှင်သန် နေရတဲ့ လူ့ဘ၀မှာတော့ မဖြစ် နိုင်တာတွေဟာ တကယ့်ကို အများကြီးပါ။ စဉ်းစားကြည့်လေဗျာ ပစ္စည်းသေးသေးလေးတခုကိုတောင် တခါတလေမှာ လိုချင်ရက်နဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် မရနိုင် လက်လွတ်ခဲ့ကြဖူးတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီလိုဆိုတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ နပိုလီယန် လို တခေတ် တယောက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတွေ အတွက်ဟုတ်ကောင်း ဟုတ်နိုင်ပေမဲ့ ကျနော် အတွက်တော့ အလွန်ခက်ခဲပါတယ် မဖြစ်နိုင်တာတွေ အများကြီးပါ။ ပြောလေ့ ရှိပါတယ် ကြိုးစားရင် ဘုရားဖြစ်တယ်တဲ့ တကယ့်ကို အပြောပဲရှိပီး လုပ်ဖို့ရာမှာ အလွန်ခက်ခဲလှပါတယ် ဇွဲ လုံ့လ ၀ီရီယ ကံ အများကြီး စိုက်မှပါ။ အိုကေ နည်းနည်းလမ်းလွဲနေပီ ကျနော် ပြောတဲ့အထဲ မှာ အကောင်းထက် အဆိုးက ပိုများနေပါတယ် ဒါက တခြား ကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး ကျနော် ဖြတ်သန်းရှင်သန်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက အဆိုးတွေ သိပ်များ နေတယ် ဒါကြောင့်ပါ တခါတလေ စဉ်းစားမိပါတယ် ဘ၀ဟာ အခက်အခဲတွေနဲ့ အချိန်ပြည့်တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ အရာ များလားလို့ အတွေးဝင်မိတဲ့ အထိပါပဲ။ တကယ့်ကိုလည်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်တွေ့ ရှင်သန်နေရတဲ့ ဘ၀တွေ ဟာ ရယ်မောသံတွေထက် စိတ်ညစ်ညူးသံတွေ ပိုများနေလားလို့ ကျနော်သုံးသပ်မိပါတယ်။ ကျနော် စာအုပ် တအုပ်မှာ ဖတ်ဖူးပါတယ် -
သရေးသျှန်းလို့ ခေါ်တဲ့ လူမျိုးနွယ်ဝင်လူစု တခုမှာ သူတို့ရဲ့ မွေးဖွားလားတဲ့ ကလေးတွေကို
ခုမွေးလာတဲ့ အချိန်က စလို့ နောက်သေဆုံးချိန်အထိ တွေ့ကြုံရမဲ့
အခက်အခဲ ဒုက္ခတွေကို ပြောပြပီး ငိုယိုကြပါတယ်
အဲ လူတယောက် သေဆုံးသွားပီဆိုတဲ့ အခါမှာတော့ သူတို့ဟာ အဲဒီလူဟာ လောကကြီးမှာ
သူတွေ့ကြုံနေရတဲ့ ဒုက္ခ အခက်အခဲတွေ စိတ်ညစ်ညူးစရာ အရာခပ်သိမ်းဟာ
ကုန်ဆုံးသွားပီဆိုပီး အဲဒီလူအတွက် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ
တဲ့။ အခု လက်တွေ့အကျဆုံး တခုကို ပြောမယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့တွေကို ဘ၀စကတည်းက ကျနော်တို့ မိဘ တွေက သွန်သင်ဆုံးမခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောင်းနေချိန်မှာ စာကြိုးစားဖို့။ နေ့စဉ်စာကျက်ဖို့ ပညာတတ်မှသာ လူ့ဘ၀ မှာ လူလူချင်း နင်းတာမခံရမှာ ဖြစ်ကြောင်း အမြဲသွန်သင်လေ့ရှိ တာကို သိကြမှာပါ။ ဒါတွေဟာ ဘာအတွက်လဲ ပညာတတ်ရင် အလုပ်ကောင်းကောင်းရအောင်လို့လား? လူ့ဘ၀မှာ သက်သက်သာသာ နေရ အောင်လို့လား? ဂုဏ်ရှိအောင်လား? အများကြီးပါ ဒီနေရာမှာ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်လာတာက “ငွေ” ပါ။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ငွေဟာ ဘ၀ကို တန်ဆာဆင် တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ နေရာတခုကနေ ပါဝင်လာတာ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ငွေမရှိပဲ ပညာသင်လို့မရပါဘူး။ ပညာတတ်နေပေမဲ့လည်း ငွေမရှိရင် စီးပွားရေးလုပ်လို့ မရပါဘူး။ အဲဒီ ငွေကြောင့်ပဲ ကိုယ့်ကျင့်သိက္ခာတွေ ယုတ်လျော့ လာကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ရှင်သန်ခြင်းရဲ့ အဓိပါယ်ဟာ ငွေရှာ ဖို့လား? မဟုတ်ပါဘူး တကယ့်ကို လွဲချော်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ့် တကယ်မှာ ဘ၀ရှင်သန်ခြင်းဟာ ငွေ ရှာခြင်းဆိုတဲ့ အရာနဲ့ ထပ်တူ အချိုးကျနေပါတယ်။ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး လူမှန်းသိတတ် ကတည်းက ကျောင်းတွေတက် ပညာတွေသင် အရာရာ အားလုံးရဲ့ နိဂုံးဟာ ငွေရှာဖို့ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကို ရောက်ရှိ သွားပါတယ်။ မွေးဖွားလာကတည်းက သေဆုံးခြင်းအထိ ငွေနောက်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲ ဘ၀ဟာ အဆုံးသတ် ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင်လဲ ခု လက်ရှိ လုပ်နေတာဟာဘာလဲ ငွေရှာနေတာပဲ မဟုတ်လား။
ဒါဆို ကျနော်တို့ရဲ့ ရှင်သန်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ဟာ ဘာလဲ ?
နောက်တခု က ကျနော်တို့ တွေဟာ လက်ရှိ ဖြစ်တည်နေတဲ့ ဘ၀ကို အလွန်တွယ်တာကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကလေးဘ၀မှာ ဆော့ကစား မြူးတာတွေကို ခုံမင်မယ် တွယ်တာမယ်။ ကျောင်းစတက်တဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေကို တွယ်တာမယ်။ မြီးကောင်ပေါက် အရွယ်မှာ ချစ်သူရည်းစား တွေ ရှိလာမယ် အဲဒီ ချစ်သူ ရည်းစားတွေကို တွယ်တာမယ်။ နောက်ပိုင်း မိမိ မိသားစု မိမိဘ၀လေး ရှိလာမယ် ဒါကိုလည်း မြတ်နိုးမယ် တွယ်တာမှာပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ် လူမှန်ရင် အတွယ်အတာ သံယောဇဉ်နဲ့ မကင်းပါဘူး။ ဒါတွေရဲ့ အခြားတဘက် ကို ခင်ဗျားတို့ သိကြရဲ့လား? သိပါတယ် ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ သိပါတယ် သိသိကြီးနဲ့ မသိချင်ဟန် ဆောင်နေ ကြတာပါ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ ဖြစ်ပျက် ဆိုတဲ့ သဘောတရားပါ လောကမှာ တည်ရှိနေတဲ့ အရာမှန်သမျှဟာ ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်း သဘောတရားနဲ့ မလွတ်ကင်းပါဘူး။ ဖြစ်ပီးရင် ပျက်မဲ့ အရာတွေပါပဲ။ ဒါဆို ကျနော် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အရာတွေအားလုံးဟာ ဒီဖြစ်ပျက်သဘောတရားအောက်မှာ ပျက်စီးသွားပါပီ။ မနက်ဖြန်ဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ မနက်ဖြန်ဆိုတာ ဝေးပါသေးတယ် ယခု လက်ရှိအခြေအနေရဲ့ နောက် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ မိမိ တို့ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ မသိနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလို ဖြစ်ပျက်သဘောတရားတွေ များပြားနေတဲ့ လောက ကြီးမှာ ကျနော်တို့တွေဟာ နောင် အနာဂတ်တွေထက် လက်ရှိ ပစ္စုန်ပန် အချိန်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို ကျေနပ် လက်ခံပီး ပျော်ပျော်ကြီးနေထိုင်မယ်ဆို ကျနော်တို့ ဘ၀တွေဟာ သာယာလှပနေမယ်လို့ ကျနော် ယူဆ မိပါတယ်။ ဒါဆို ကျနော်တို့ ရှင်သန်နေတဲ့ ဘ၀ကြီးမှာ ဘာက အရေးကြီးဆုံးလဲ ? –
ငွေးကြေး ဥစ္စာလား ?
ကဲ ဒါကတော့ ကျနော်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ပါပဲ။ ကျနော် စာအရေးအသားညံ့တာကြောင့် ကျနော်ဆိုလိုချင်တာကို တိုက်ရိုက် မြင်ချင်မှ မြင်ပါလိမ့်မယ် အကြောင်းအရာတွေ ရှုပ်ထွေးကောင်း ရှုပ်ထွေးနေပါလိမ့်မယ်။ တတ်သလောက် ရေးသားခြင်းသာဖြစ်လို့ သည်းခံစေချင်ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးချက်လေးဟာ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူကိုမှ ထိခိုက် ရေးသား ခြင်း မဟုတ်ပဲ ကျနော် ဖြတ်သန်းရှင်သန်လာတဲ့ ဘ၀တလျှောက်က အကြောင်းအရာတွေကိုသာ ကျနော့ရဲ့ မတောက်တခေါက် ဥာဏ်ရည်နဲ့ သုံးသပ်ထားခြင်းမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပီး ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေကသာ စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ ပါဝင်ဆွေးနွေးမယ်ဆို ကျနော် ၀မ်းသာမိမှာပါ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အမြင်လေး တွေကို ကျနော် မျှော်လင့်ပါတယ်။ မည်သူ့ မည်သူကိုမျှ ထိခိုက်ရေးသားခြင်း မဟုတ်ပဲ ဆွေးနွေးချက် တခုမျှသာ ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောဆိုချင်ပါတယ်။
သင်္ဘောသားအကြောင်း တစေ့တစောင်း ၁
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 9:23 PM
ကဲ ဒီတလောတော့ သင်္ဘောသား က သင်္ဘောအကြောင်းတွေပဲ ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်ဗျ။ မသိတဲ့ လူတွေလဲ သိရအောင်လို့ပါ။ ကျနော် ဒီတခါ ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းက သင်္ဘောပေါ်မှာ လုပ်တဲ့ Emergency Drill အကြောင်းပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲ သင်္ဘောသားမှန်ရင် ဘယ်သင်္ဘောပဲ လိုက်လိုက် ဆိုလိုချင်တာက Cargo (ကုန်တင်သင်္ဘော) ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Passenger (ခရီးသည်တင် အပျော်စီးသင်္ဘော) ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Drill တွေက ပုံမှန် လုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ Emergency Drill ဆိုတာကတော့ မိမိတို့သင်္ဘော အန္တရာယ်ကျရောက်လို့ အရေးပေါ် အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ရှိသော် ၀ရုန်းသုန်းကားမဖြစ်စေပဲ အစီအစဉ်တကျ မိမိတို့ တာဝန်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပီး အန္တရာယ်မှ လွတ်ကင်းအောင် လေ့ကျင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးဟာ ကျနော်သိသလောက်ဆိုရင်တော့ Ship Rules & Regulations အရ ရေယာဉ် မှန်သမျှ မှာ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီ Drill ဟာ ကျနော်တို့ သင်္ဘောမှာ တပတ် တခါ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲ တပတ်တခါဆိုပေမဲ့ Crew တွေ သာ ဖြစ်ပီး၊ ကျနော်တို့ ကာစီနိုဘက်က လူတွေကတော့ ၂ ပတ်မှသာ တခါ လုပ်ရပါတယ်။ သင်္ဘောပေါ်မှာ နှစ်ခြမ်း ကွဲ နေတယ်ဗျ။ Deck သမားတွေ Crew တွေ က တပိုင်း၊ ကာစီနို သမားတွေက တပိုင်းရယ်ပါ။ Crew တွေမှာ Deck သမားတွေ၊ Engine သမားတွေ၊ House Keeping၊ Taylor၊ Laundry man၊ Galley တွေ အစရှိသဖြင့်ပါ ပါတယ်။ ကာစီနို ဘက်ကတော့ Crew ရယ်လို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ Staff တွေလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Dept အစုံမှာ မြန်မာတွေရှိပေမဲ့ ကျနော်တို့ ကာစီနိုသမားတွေနဲ့ သိပ်မတည့်လှပါဘူး။ ဒါတွေနောက်မ သပ်သပ်ရှင်းပြပါဦးမယ်။ ကဲ Drill လေး စလိုက်ရအောင်။ ဒီလိုနေ့မျိုးဆို သင်္ဘောပေါ်က လူတွေ အားလုံးဟာ Alert ဖြစ်နေရပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ Emergency Alarm ထမြည်မလဲလို့ပေါ့။ သင်္ဘောတိုင်းရဲ့ General Emergency Alarm Signal ဟာ Seven Short and One Long Blast ပါ။ အသံတို ခုနစ်ချက် အသံရှည် တချက်ကို ကြားရင် ဒါဟာ အရေးပေါ်အခြေအနေပါပဲ။ သိထားရမှာက Captain တိုင်းဟာ ဒီလို အရေးပေါ် Alarm ကို လွယ်လွယ်ကူကူ တီးလေ့ မရှိပါဘူး။ အဲ အဲဒီအသံကြားပီဆိုရင်ဖြင့် တကယ့်ကို အန္တရာယ်တွေ့ပီလို့သာ မှတ်လိုက်ပါတော့။ ကျနော်တို့မှာ လုပ်နေကျပုံစံကတော့ Dill စပီဆိုရင် Fire Alarm တီးပါတယ် မီးလောင်နေတယ်ပေါ့။ Fire Alarm ကတော့ Continuous Ringing ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ Fire Team မှာ ပါတဲ့ သူတွေက မီးလောင်တဲ့နေရာကို သွားပီးတော့ မီးညှိမ်းသတ်ရပါတယ်။ Entertainment Staff အများစုကို Fire Team မှာ ထည့်လေ့ မရှိပါဘူး။ Fire Team မှ မဟုတ်ပါဘူး အရေးပေါ် လုပ်ဆောင်ရတဲ့ Group တွေမှာ ထည့်လေ့ကို မရှိတာပါ။ တကယ့်အရေးပေါ် Group တွေမှာ ပါဝင်တာက Crew တွေပါပဲ။ သူတို့ကသာ တကယ်အတွေ့အကြုံရှိပီး သင်္ဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်နေရတဲ့ သူတွေမို့ပါပဲ။ မီးငြိမ်းသွားပီဆိုရင် General Emergency Alarm မြည်လာပါပီ အဲဒီလို မြည်လာပီဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ ကျနော်တို့ကိုသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ Emergency Station ကိုသွားရပါတယ်။ အမျိုးမျိုးပါပဲ Water Tight Door တွေပိတ်ရတဲ့ တာဝန်၊ ခရီးသည်တွေကို Assist pass လုပ်ပေးရတဲ့တာဝန်၊ Crowd Management လုပ်ရတာတွေ စသဖြင့် တာဝန်အသီးသီးရှိကြပါတယ်။ ကျနော် Emergency Station ကတော့ Water Tight Door ပိတ်ရတဲ့ တာဝန်ပါပဲ ကံဆိုးသူ မောင်ရှင်လေ L။ တကယ့်ကို ဘယ်သူမှ မလုပ်ချင်တဲ့နေရာပါပဲ အန္တရာယ်အများဆုံးနေရာ မို့ပါ။ ရေ၀င်လာတဲ့အခါ တံခါး ပိတ်ပီးမှ နောက်ဆုံးမှ Life Boat Station ကိုသွားရမှာပါ။ တကယ့်ကို အန္တယ်ရာယ်များလှပါတယ်။ ကဲ ဆက်လိုက်ရအောင် အဲလို Emergency Alarm မြည်လာပီဆို ကိုယ့်စတေရှင် ကိုယ်သွားပီ စာရင်း ပေးကြ ရပါတယ်။ အဲဒါမှ ဒီနေ့လုပ်တဲ့ Drill ကို မိမိတက်ကြောင်း သိနိုင်မှာပါ။ ကိုယ်သာ Absence ဖြစ်ခဲ့ရင် ၁ လ ဒါမှမဟုတ် ၂လ အထိ Shore Leave ပိတ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကာစီနို စတဖ်ဆိုပါက Casino Management Team ကပေးတဲ့ လစာ Deduction ပါ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုနေ့မျိုးကို မတက်ပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ အဲ့လို စာရင်းပေးပီးပီဆိုရင် Life Boat Alarm မြည်တဲ့ အချိန်ကို စောင့်ရပါတယ်။ တကယ့်အခြေအနေမှာ Life Boat Alarm မြည်ပီဆိုရင် ဘာမှ မစဉ်းစားပဲ Life Boat ဆီကိုသာ လုပီးပြေးရမှာပါ တကယ့်ကို လိုအပ်လို့ စွန့်ခွာရမဲ့ အခြေအနေမို့ Alarm ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုမြည်ပီဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ ကိုယ့် Life Jacket ကို ကိုယ်ယူပီး မိမိ စီးရမဲ့ Life Boat ကို ပြေးရပါတယ်။ Life Boat မှာမှ Boat Launching လုပ်ဖို့အတွက် အသီးသီးတာဝန် ပေးထားပါတယ်။ Boat ကိုရောက်တာနဲ့ အသီးသီး တက်ပီး မိမိတာဝန်အတိုင်း လုပ်ကြရပါတယ်။ Life Boat Launching လုပ်တဲ့ ကိစ္စဟာလည်း လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး အကြိမ်ကြိမ်လေ့ကျင့်ထားမှသာ တကယ့်အခြေအနေမှာ အခက်အခဲမရှိမှာဖြစ်ပါတယ် (ကျနော်ကိုယ်တိုင် ကတော့ Life Boat Launching ကို စာသာ ရပီး ခုချိန်ထိ ကိုယ့်ဘာသာ ချဆို တကယ့်ကိုမချတတ်သေးတာပါ :D ) အားလုံး Ready ဖြစ်ပီဆိုရင် Captain and Staff Captain က Boat အသီးသီးကို လိုက်ပီးစစ်ကာ စာမေးတတ်ပါတယ်။ မိမိ ဘုတ်အကြောင်း Safety Knowledge အကြောင်း အစုံပေါ့။ အဲကံဆိုးစွာနဲ့ ကိုယ့်ကိုရွေးကာ စားမေးလို့ မရရင်တော့ သေချာပါတယ် Shore Leave တလ ဒါမှမဟုတ် ၂လပါ အပိတ်ခံရပါတယ်။ အကုန်မေးပီးလို့ Captain က P.A System ဖြင့် Abandon Ship အော်ရင်တော့ Good Bye လုပ်ပီး အမိ သင်္ဘောကို စွန့်ရုံသာရှိပါတော့တယ်။ (Captain ရဲ့ Order မရမခြင်း ဘယ်လောက်ပဲ အခြေအနေဆိုးဆိုး သင်္ဘောကို စွန့်ခွာခွင့်မရှိပါဘူး)။ အဲလို အော်ဒါရပီဆိုရင်တော့ Boat Commander တွေက Boat ကို စက်နှိုးပီး သင်္ဘောဝန်းကျင် သရုပ်ပြ မောင်းနှင် ပါတယ်။ (လှိုင်းကြီးနေရင်တော့ မဆင်းရပါ)။ တပတ် မောင်းပီးတဲ့အခါမှာ အပေါ်ကို ပြန်တက်ပါတယ်။ Emergency Drill နဲ့ တွဲပီးတလတခါ လုပ်တာကတော့ Casino Drill ပါ။ ဒါဟာလည်း ကျနော်တို့ ခရီးသည်တင် သင်္ဘောအတွက် အရေးကြီးလှပါတယ်။ အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ ကာစီနိုထဲမှာ ပိုက်ဆံတွေ ရှိနေတာကိုး။ အဲဒါတွေကို စနစ်တကျ ထုတ်သယ်ဖို့ တာဝန်တွေခွဲထားပြန်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကာစီနိုစတတ်ဖ် တွေဟာ အဲဒါကြောင့် အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Group တွေမှာ မပါနိုင်တာလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖဲဝိုင်းတွေက Chips ပြားတွေက သိပ်အရေးမကြီးလှပါဘူး အဓိက က ကျနော်တို့ Slot Machines တွေက ပိုက်ဆံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာက တကယ့်ပိုက်ဆံတွေဝင်နေတာကိုး Chips ကျတော့ ပြန်လဲရတာလေ။ Slot ရယ် ငွေခန်းက ငွေတွေကို သရုပ်ပြ ထုတ်တာတွေကို လေ့ကျင့်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ ခံရတာပါပဲ။ Slot Machine တွေက Bill Box တွေက အလေးချိန်မနည်းလှပါဘူး။ သရုပ်ပြတယ်ဆိုပေမဲ့ အနည်းဆုံး လေးငါးလုံးတော့ ပုံးကြီးထဲ ထည့်ပီး ဟိုးအပေါ်ဆုံးက Boat Station ကို သယ်ရတာဆိုတော့ မသက်သာလှပါဘူး။ ကဲ Emergency Drill ဆိုတာကတော့ ဒါပါပဲခင်ဗျာ။
သင်္ဘောသားရဲ့ ShoreLeave တခေါက်
0 comments Posted by မိုးသောက်ယံ at 9:13 PM
ကျနော်နဲ့ ဘလော့ဂ်လဲ ဝေးနေတာကြာပါပီ .. ဝေးဆို အလုပ်ကလည်း မအားပဲကိုး .. ကိုယ့်ဘလော့ဂ်လေး ကိုယ် မ၀င်ဖြစ်ပေမဲ့ .. သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေတော့ ၀င်မြဲ ဖတ်မြဲပါ .. ကိုယ် ကိုယ်တိုင် ရေးအားနည်း ပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ပို့စ်အသစ်မတင်ရင် .. ဘာလို့များလဲပေါ့ .. ပို့စ်လေးတပုဒ်တောင် မတင်ဘူးလားပေါ့ .. ဒီမှာတော့ လာဖတ်လိုက်ရတာပေါ့ .. (အဲ့လိုတကိုယ်ကောင်းဆန်တာလေ အတ္တပေါ့ဗျာ :D) .. ကဲ အခုတော့ ကျနော် ပြန်ရေးပါပီ ခင်ဗျာ .. ဒီတလလုံးကို အပီအပြင်ရေးလို့ရပါပီ .. အဟဲ ကုန်ကြမ်းတော့ လိုတာပေါ့ နော်။
မနေ့ကတော့ ကျနော့်တို့ရဲ့ ဘုရားပွဲလှည့်တဲ့နေ့ပါပဲလို့ .. တလတခါ Ship Maintenance Day ပါပဲ။ ကျနော်တို့ လို တလလုံး သင်္ဘောပေါ်မှာပဲ နေ နေရတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ဒီလို နေ့ဟာ ရွှေပါပဲ။ အဲဒီနေ့ မတိုင်ခင် ညတည ဟာ ကျနော့်အတွက် Nigh Shift မှာ နောက်ဆုံးနေရတဲ့ တညပါပဲ Maintenance Day မှာ အောက်ဆင်းလည်ပီး နောက်နေ့မနက်ကျမှ ကျနော်အလုပ်ပြန်ဝင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရက်အနားရတဲ့ သဘော ပါပဲ ဒါပေမဲ့ အောက်ဆင်းရမဲ့ နေ့နဲ့ တိုက်နေတော့ကာ မနားရဘူးပေါ့။ အဲဒီလိုညမျိုးမှာ ၀န်ထမ်းတွေအချင်းချင်း တွေ့ကြရင် မေးတဲ့စကားကတော့ “မနက်ဘယ်သွားမှာလဲ“ ဆိုတာပါပဲ။ ကျနော်တို့ အများဆုံးဆင်းရတဲ့ မြို့ဟာ မလေးရှား Penang ဖြစ်တဲ့အတွက် လည်စရာကတော့ များများစားစားမရှိပါဘူး။ အဓိက ကုန်တိုက်ကြီး တခုရှိ တဲ့နေရာကိုသွား တလစာအတွက် လိုအပ်သမျှဝယ်ခြမ်း ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ တလတခါ ဟာ မရိုးတမ်းလုပ် နေရ တဲ့ အလုပ်တခုပါပဲ။ အမြဲတမ်း တနေရာတည်း ဆိုပေမဲ့လည်း တလမှတခါရယ်သာ ဆိုတော့ ရှိသမျှ ၀န်ထမ်း မိန်းကလေး ယောကျာ်းလေး မရွေး အကုန်ဆင်းတာ များပါတယ်။ အပေါ်မှာနေရင်လည်း မထူးပဲကိုး။ Ship Maintenance Day ဆိုတဲ့အတိုင်း အကုန်ဆင်းပီဆိုတာနဲ့ ရှိသမျှရေသန့်လိုင်းတွေ ဖြတ်၊ အဲကွန်း ဖြတ်၊ Black Out လုပ်ဆိုတော့ အပေါ်မှာ နေတဲ့လူဟာ အတော့ကိုရှားပါတယ်။ မရှိဘူးရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ မဆင်းပဲနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူတို့အတွက်ကတော့ အခန်းထဲ အိပ်နေရုံကလွဲပီး ကျန်တာ လုပ်စရာ မရှိလှပါဘူး။ အဲ မီးပြန်လာပီဆိုရင်တော့ ဇိမ်ပေ့ါဗျာ။ ကျနော်ကတော့ သင်္ဘောပေါ်စရောက်ကတည်း ကနေ ဒီနေ့အထိ အဲ့လိုနေ့မျိုးကို လွတ်သွားရိုးထုံးစံမရှိပါဘူး။ လတိုင်းကို ဆင်းတာပါပဲ။ နဂိုကတည်းက ခြေ အငြိမ်နေခဲ့တဲ့ ကောင်မှ မဟုတ်ပဲလေ။ အဲဒီလိုနေ့မျိုး နီးလာပီဆိုရင် ငါတော့ သုံးထားတာများနေပီ ဒီလမဆင်း ပဲနေမှပဲ လို့ အမြဲ တွေးတတ်ပေမဲ့ ဒါဟာ တွေးတဲ့အဆင့်မှာပဲ ကျန်ခဲ့တာပါ တကယ့်နေ့ရောက်လာပီဆိုရင်တော့ မဆင်းပဲကို မနေနိုင်ပါဘူး ဆင်းတာပါပဲ :D
ဒီတခါလည်း ထုံးစံအတိုင်း ဆင်းကြမယ်ပေါ့ဗျာ။ ထုံးဆံအတိုင်းဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ သွားနေကျ သူငယ်ချင်း တွေ ငါးယောက်ရှိပါတယ်။ ကျနော်ရယ် ကျနော့ အခန်းဖော် ၂ယောက် နောက် ဖဲဝိုင်းက သူငယ်ချင်းတယောက်၊ ငွေခန်းက သူငယ်ချင်းတယောက် ပေါင်းငါးယောက်ပါ ဒါကကျနော်တို့ Shore Leave နေ့မျိုးမှာ သွားနေကျ လူစုပါ။ ကျနော်တို့ဟာ ဘယ်လောက်တောင်များ မဆင်းချင်ကြဘူးလဲဆို။ကျနော်တို့ ရေလယ်မှာ ရပ်ထားတဲ့ သင်္ဘောကနေ ကုန်းပေါ်ကိုရောက်ဖို့ ဖယ်ရီနှင့်တဆင့် သွားရပါတယ် မနက် ၈ နာရီကစလို့ပေါ့ဗျာ တနာရီခြား တခါ ရှိပါတယ် အဲ ကျနော်တို့က အဲဒီ ၈နာရီ ပထမဆုံးဖယ်ရီနဲ့ကို ဆင်းနေကြဗျ ။ ည အလုပ်က ပီးတာက မနက် ၇နာရီ။ Check Out ထွက်လာပီဆို ကမန်းကတမ်း ရေချိုး အ၀တ်အစားလဲပီး ၈နာရီဖယ်ရီနှင့် ဆင်းနေကျပါ။ ဒီတခေါက်ကတော့ ကျနော်တို့ အခန်းသား သုံးယောက်ဟာ အဲလို မဆင်းနိုင်ပါဘူးဗျာ။ ဟိုနှစ်ယောက်ကို သာအရင်လွှတ်ပီး တနေရာမှ ချိန်းဖို့သတ်မှတ်ထားရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော် တို့ ရှေ့တပတ် Cabin Inspection တုန်းက Smelly Cabin ဆိုတဲ့ အလွန့် အလွန်ကောင်းတဲ့ ပြစ်ချက်နဲ့ Fail ဖြစ်ထားတော့ကာ ဒီတပါတ် Inspection မှာ ထပ်ကျလို့မဖြစ်ဘူးလေ .. Cabin Inspection ဆိုတာက သင်္ဘောပေါ်က ကျနော်တို့ ၀န်ထမ်းတွေ အခန်းတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် နေ မနေ၊ အခန်းထဲမှာ ပျက်စီးမှု ရှိမရှိ လိုအပ်တာတွေကို တောင်းဆိုလို့ ရအောင် Captain, Staff Captain တို့က ဦးဆောင်ပီး လိုက်စစ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Cabin Inspection ဟာ တပတ်တခါ ကြာသာပတေးနေ့တိုင်းရှိပါတယ်။ Steward မငှားနိုင်တဲ့ ကျနော်တို့ အခန်းက သုံးယောက်သားဟာ အဲလိုနေ့မျိုးမှသာ တပတ်တခါ ရှုပ်ထားတာတွေကို အသေရှင်း ရပါတယ်။ ဒီတပါတ်လဲ ထုံးစံအတိုင်း ရှင်းထားရက်နဲ့ ဘယ်က အနံ့ က ဘယ်လိုထွက်လို့ သူကြီး က ရှုမိတယ် မသိပါဘူး။ ကောက်မှတ်သွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ Suspension Cabin List တွေ ထွက်လာတော့မှ သွားကြည့် တော့ ကျနော်တို့အခန်းက Smelly Cabin ဆိုတဲ့ ပြစ်ချက်နဲ့ 2weeks No Shore Leave ပါတဲ့။ ဗုတ်ဒေါ အရင် တပါတ်က ဆိုတော့ No Shore Leave သာဆို ကျနော် တို့ Maintenance Day မှာ ဆင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်တို့ဟာလဲ အသည်းအသန် ဆိုင်ရာတွေမှာ လိုက်ပီး အယူခံဝင်ရတော့တာပေါ့။ အဲဒါနဲ့တခန်းချင်း ပြန်စစ်တဲ့ အထူးစပါယ်ရှယ်စစ်ပွဲမှာ ကျနော်တို့ အခန်းဟာ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်အောင်သွားတော့တာပေါ့။ (အောင်မှာပေါ့ သူကြီးလာခါနီး ဖျန်းထားတဲ့ Air Fresher က နှစ်ဘူး ကို ကုန်ရော :D) အဲဒီလိုနဲ့ ဒီနေ့ Shore Leave ဆင်းပီး မနက်ဖြန် ကြာသာပတေး Inspection လာမယ်ဆိုတော့ ဒီတခါမပေါ့ရဲတော့ဘူးလေ။ အဲဒါနဲ့ သုံးယောက်သား သဘောတူပီး မသွားခင် ရှင်းကြမယ်ဆိုပီး Check Out ထွက် ၇ နာရီကနေ ၉ နာရီခွဲ ထိ ရှင်းလိုက် ကြတာ ဖတ်ဖတ်ကို မောရောပါပဲ။ (စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့ဗျာ တပတ်ပဲ မရှင်းထားတာ ၂နာရီခွဲ ရှင်းယူ ရတယ်ဆိုတော့ :D )။ အဲလိုနဲ့ ကျနော်တို့ သုံးယောက်သား ၁၀ နာရီ ဖယ်ရီနဲ့ အမှီဆင်းလာနိုင်တာပေါ့။ အရင်လို အေးအေးဆေးဆေး ဆိုင်တဆိုင်မှာ ထိုင်ပီး မစားမသောက်နိုင်တော့ဘူးလေ ရတဲ့ Taxi ငှားပီးတော့ ချိန်းထားတဲ့ ကုန်တိုက်ကိုပဲ အရောက် သွားရပါတော့တယ်။ ဟိုရောက်လို့ဘော်ဒါတွေ စုံမှ မြန်မာဆိုင်မှာ မနက်စာ စားကြပါတယ်။ သိတယ်မဟုတ်လား မြန်မာပဲဗျာ မုန့်ဟင်းခါးပေါ့ ဘူးသီးကြော်နဲ့ ၀ိုက်ပလိုက်တယ်။ ရန်ကုန်မှာလိုတော့ စားလို့ မကောင်းတာ အမှန်ပါပဲ ဒါပေမဲ့လည်း အလွမ်းပြေ ရှိတာလေးနဲ့ ကျေနပ်ရတာပေါ့။ ဒါနဲ့မတင်းတိမ်နိုင်တော့ ဟင်းတွေကျက်လို့ လာချတဲ့ အခါ ကျနော် က ငါးခူကြော်နပ်၊ အမဲသားငရုပ်သီးနဲ့ မွကြော်ထားတာနဲ့ ထပ်ကြိတ်လိုက်ပါတယ် :D (အစားကြီးပုံပြောပါတယ်)။ ပီးတော့မှ အိမ်ကို ငွေပို့ရမလား မပို့ရဘူး ဆိုတာ ဖုန်းဆက်မေးကြတယ်။ ဒါကလည်း မရိုးနိုင်တဲ့ အလုပ်ပါပဲ။ (အိမ်ကသာ ဒီလတော့မပို့နဲ့ ဆိုလို့ကတော့ ကုိုယ်တို့ပွဲပဲပေါ့ :D ) ဒါပေမဲ့ အိမ်က ပို့ပါဆိုတာနဲ့ ရှိတာလေး သုံးဖို့ချန်ပီး ပို့လိုက်ရတယ်လေ :( ။ ဒီလိုနဲ့ ငွေပို့ပီး ငွေအားနည်းနေတဲ့ ကျနော်ဟာ ဒီနေ့ တနေ့တာ Window Shopping သာလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်။ (ကွမ်းသီးကို ရဲဖမ်းတဲ့လေသံလေ :D)။ မ၀ယ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်း အခန်းအတွက် သုံးယောက် Share ၀ယ်တဲ့ အထဲကိုတော့ ထည့်လိုက်ရသေးတာပေါ့။ အခန်းအတွက်ဝယ်တယ်ဆိုတာကတော့ ဒီလိုပါ အခန်းအတွက်က သူ့ပစ္စည်းကိုယ့် ပစ္စည်းခွဲမသုံးကြလေတော့ တလတခါလိုတဲ့ သွားတိုက်ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဆပ်ပြာမှုန့် အစ .. အစ ရှိသဖြင့်ပေ့ါဗျာ အတူပေါင်းဝယ်ကြပါတယ် အဲဒါကို ဆိုလိုတာပါ။ ကျနော် တို့ဟိုလုပ် ဒီလုပ်နဲ့ ၀ယ်ချမ်းအပီးမှာ နာရီကြည့်တော့ နှစ်ခွဲနေပီဗျာ။ ကျနော်တို့ ကာစီနို Staff တွေက ညနေ လေးနာရီ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ပြန်တက်ရပါတယ်။ ညအလုပ် ၀င်ရမဲ့ သူတွေက ရှိတာကိုး။ မနက်မှ အလုပ်ဝင်မဲ့ သူကတော့ နားပေါ့ ဒီလိုပါ။ အဲ လေးနာရီကျော်ပီးမှ ရောက်လာရင်တော့ Management Team ရဲ့ Decision ဆိုတာကြီးကို ရင်တမမ နဲ့သာစောင့်ပေတော့ဗျို့ ။ ကံမကောင်းရင် Terminate လုပ်တဲ့ အထိ ပြစ်ဒဏ် ရနိုင် ပါတယ်။ ကဲ ပြောနေတဲ့ စကားတောင် ဘယ်ရောက်လဲ မသိတော့ဘူး။ ၂ ခွဲနေတော့ မှ အသည်းအသန် လက်ကျန် ၀ယ်စရာရှိတာကို အပီးဖြတ်ပီး တဂွီဂွီတဂွမ်ဂွမ် ဖြစ်နေတဲ့ ဗိုက်ပြသနာကို နီးရာ တရုတ်ဆိုင်တဆိုင်မှာ ဖြေရှင်းလိုက်ရပါတယ်။ အားလုံးပီးတော့ ၃ခွဲ ဖယ်ရီဆိပ်ကို ငါးယောက်သား အသားကို ကားငှားပီး လစ်ရ ပါတော့တယ်။ တော်သေးတာက ဖယ်ရီ ထွက်ခါနီးလေးမှာပဲ ကျနော်တို့ အောင်မြင်စွာ ဖယ်ရီပေါ်က ခုံငါးလုံးမှာ အမိအရထိုင် နိုင်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ကဲ တလ Shore Leave တော့ ပီးသွားပြန်ပါပီ။ နောက်လကို စောင့်ရင် ဒီမှာပဲ လေကြောရှည်တာကို ရပ်နားလိုက်ပါတယ်။